MBA from University of Bolton | Inspiro Institute
MBA from University of Bolton
Wint Phyo Maun Maung
Graduates are our Assets
MBA Program များဟာကုန်ကျစားရိတ်လဲ မြင့်မားသလို အားအင်စိုက် ထုတ်မှုလဲရှိမှသာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် အကျိးခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Two Part Program Structure and Modules
MBA ကိုတော့ အပိုင်း(၂) ပိုင်းဖြင့် သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာတော့ NCC Level-7 post-graduate diploma in Business Management တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီး Modules (၆) ခုကိုသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Module တစ်ခုပြီးတိုင်းမှာတော့ Master’s level unit certificate ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီး ဘာသာရပ်အားလုံးပြီးရင်တော့ L-7 Post-Graduate Diploma ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းကတော့ University Of Bolton ကနေပေးအပ်မည့် MBA ဘွဲ့ကိုရရှိမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ UOB ရဲ့ Approved Partner ဖြစ်တဲ့ WINC, UK မှ ကျောင်းသား။ကျောင်းသူ အုပ်စုငယ်များ ဖြင် Online Virtual Classroom ကိုအသုံးပြုပြီးပို့ချသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း Module ၂ ခု + Dissertation ကို သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
At Inspiro Institute,The program is completed in two stages. Your MBA Journey starts with NCC Level7Diploma in Business Management awarded by NCC, UK delivered by Leading Lecturers at Inspiro Institute. Research skill and leadership development workshops are provided as add on benefit.
Second Part: MBA Degree awarded by the University of Bolton is delivered by UoB approved partner WINC (lectures and tutorials by UoB approved tutors, online virtual classroom).
First Part and Second Part Modules
Second Part: MBA Awarded By University of Bolton
First Part Post Graduate Diploma in Business Management
International Marketing Strategy-
Corporate Finance and Decision Making
First Part - 3.5 သိန်း လစဉ် x7လ + 500GBP Registration
Second Part - 500 USD လစဉ် x 8 လ
Graduate of any University (or)
UK Level6Diploma in any discipline
Mature/Experienced candidates without degree are considered by case by case
English Placement Test of Inspiro Institute (or) IELTS
သင်တန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်အတွက် 09-257776667 သို့
စဉ်းစားနေတာလား? အခုပဲ Recruitmment team နဲ့ဆက်သွယ်ပြီး အကြံဉာဏ်ရယူလိုက်ပါ။
110-112,Bo Aung Kyaw Street(Lower Block),Yangon,11181.
@2020 Inspiro Institute.Proudly Created by the students of Inspiro from L5DBIT.Mr.Soe Moe Lwin,Miss.Su Pan Aung,Mr.Soe Lwin Tun